केरकारमा ऐना,(बासु श्रेष्ठ)
(फोटो: रामलालको फेसबुक)
आँचलिक भाषामा आधारित कतिपय सँवादको अर्थ सामान्य पाठकले बुझ्न कठिन भएको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ?
तराईमा बोलिने अश्लिल शब्दहरुपनि कथामा जस्ताको त्यस्तै समावेश गरिएको छ । समावेश गरिनै पर्ने कस्तो बाध्यता हो यो?
प्राय कथाहरुमा कुनै न कुनै प्रकारले यौनका विषयले प्रवेश पाएका छन् । अझ विशेष भन्ने हो भने कथाहरुमा एक्स्ट्रा मेरिटल रिलेसनको उल्लेख धेरै भेटिन्छ । लगायत अन्य केरकार प्रस्तुत छ |